အိုအီးနိုးကျွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
23°55′36″S 130°44′14″W﻿ / ﻿23.92667°S 130.73722°W﻿ / -23.92667; -130.73722ကိုဩဒိနိတ်: 23°55′36″S 130°44′14″W﻿ / ﻿23.92667°S 130.73722°W﻿ / -23.92667; -130.73722
၂၀ km2 (၇.၇ sq mi)
အိုအီးနိုးကျွန်း (အင်္ဂလိပ်: Oeno Island; /oʊˈiːnoʊ/ oh-EE-noh) သို့မဟုတ် Holiday Island သည် တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်းတွင် တည်ရှိသော အလယ်၌ ရေငန်အိုင်ရှိသော သန္တာကျောက်ကျွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ပစ်ကိန်ကျွန်းစု ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေတွင် ပါဝင်သည်။
၁.၁ အရေးပါသော ငှက်နေထိုင်ရာ ဧရိယာ
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း အိုအီးနိုးကျွန်း၏ တည်နေရာ
ပစ်ကိန်ကျွန်း၏ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၄၃ ကီလိုမီတာ (၈၉ မိုင်) အကွာ၊ မြေပုံညွှန်း 23°55′26″S 130°44′03″W﻿ / ﻿23.92389°S 130.73417°W﻿ / -23.92389; -130.73417 တွင် တည်ရှိသည်။ အိုအီးနိုးသန္တာကျောက်ကျွန်းသည် အလယ်ရှိ ရေအိုင် အပါအဝင် အချင်း ၅ ကီလိုမီတာ (၃.၁ မိုင်) ခန့်ရှိပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာ ၂၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၇.၇ စတုရန်းမိုင်) ကျော် ဖြစ်သည်။ ကျွန်းငယ်ကြီး ၂ ခုနှင့် ကျွန်းငယ်လေး ၃ ခုသည် သန္တာကျောက်ကျွန်း၏ အနားဝန်းပေါ်နှင့် အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းတို့၏ ကုန်းမြေဧရိယာ စုစုပေါင်းမှာ ၀.၆၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁၇၀ ဧက) သာ ဖြစ်သည်။ အိုအီးနိုးကျွန်းကို ပစ်ကိန်ကျွန်းရှိ နေထိုင်သူအချို့က အားလပ်ရက်အပန်းဖြေ ကိုယ်ပိုင်နေရာအဖြစ် ပြုမူကြပြီး ဇန်နဝါရီလတွင် ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ခန့် နေထိုင်တတ်ကြသည်။
ပင်မကျွန်းဖြစ်သော အိုအီးနိုးသည် ဧရိယာ ၀.၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁၂၀ ဧက) ခန့်ရှိပြီး သစ်တောရှိကာ pandanus နှင့် အုန်းပင်များဖြင့် ပြည့်နေသည်။ အလယ်ရေအိုင်၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်းပေါ်တွင် ရေပိုက်ခေါင်းတစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားသည်။ အမြင့်ဆုံး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်မှာ ၅ မီတာ (၁၆ ပေ) အောက်ဖြစ်သည်။ စန္ဒီကျွန်း (သို့မဟုတ် ကျွန်းများ) သည် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ပေါ်ပင်ကျွန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျွန်းငယ်သုံးခုသည် ပင်မကျွန်း၏ တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
အရေးပါသော ငှက်နေထိုင်ရာ ဧရိယာ[ပြင်ဆင်ရန်]
အိုအီးနိုးကျွန်းသည် မာဖီပင်လယ်ငှက်များ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး နေထိုင်ကျက်စားရာနေရာဖြစ်ခြင်းကြောင့် အရေးပါသော ငှက်နေထိုင်ရာ ဧရိယာ အဖြစ် BirdLife International မှ သတ်မှတ်ထားသည်။
ဗြိတိသျှ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘော ဟာကျူလီ ၏ ကပ္ပတိန် ဂျိမ်းစ် ဟန်ဒါဆင် က အိုအီးနိုးကျွန်းကို စတင် မြင်တွေ့ခဲ့သည်။
၂၆ ဇန်နဝါရီ ၁၈၂၄
အမေရိကန် ဝေလငါးဖမ်းသင်္ဘော အိုအီးနိုး၏ ကပ္ပတိန် ဂျော့ရှ် ဝေါ့ က သန္တာကျောက်ကျွန်းအား သူ၏ သင်္ဘောအမည်ဖြင့် မှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။
၅ မတ် ၁၈၅၈
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ ရွက်လွှင့်လာသော တန်ချိန် ၁၅၀၀ ရှိ Wild Wave ရွက်သင်္ဘောသည် အိုအီးနိုးကျွန်း၏ သန္တာကျောက်တန်းတွင် နစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့သည်။
Khandeish သင်္ဘောသည် အိုအီးနိုးတွင် နစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့သည်။
၂၃ ဩဂုတ် ၁၈၈၃
Oregon သင်္ဘောသည် အိုအီးနိုးတွင် နစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့သည်။
Bowdon သင်္ဘောသည် အိုအီးနိုးတွင် နစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့သည်။
၁၀ ဇူလိုင် ၁၉၀၂
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းက အိုအီးနိုးအား သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ပစ်ကိန်ကျွန်းစု ကိုလိုနီအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
↑ အမည်သည် ဂရိနာမည်ဖြစ်ပြီး ပိုလီနီးရှန်းအမည် မဟုတ်ပါ။ ဝေလငါးဖမ်းသင်္ဘော Œno /ˈiːnoʊ/ ကို အစွဲပြုပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်းသားများက ပိုလီနီးရှန်းအမည်များကဲ့သို့ သရအက္ခရာများကို ဝဏ္ဏသံဖြင့် အသံထွက်ကြသည်။
↑ South Pacific & Micronesia။ Lonely Planet။ 2006။ p. 427။ ISBN 1-74104-304-2။ Unless you've got your own yacht, your only chance of getting to Oeno is in January, when Pitcairners fit out two of their longboats with essential supplies and swap everyday life on Pitcairn forafortnight's summer holiday on Oeno.
↑ Fresh water is pumped out ofawell dug in the sand Archived 24 November 2016 at the Wayback Machine. – library.puc.edu
↑ BirdLife International။ Oeno Island။ Sites - Important Bird Areas (IBAs)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wreck of The "Wildwave," the Diary of Capt. Josiah N. Knowles။ 28 September 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Silverman၊ David (1967)။ Pitcairn Island။ Cleveland, Ohio: World Publishing Company။ p. 125။ 11 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Island Evolution: Oeno Island Archived 1 October 2006 at the Wayback Machine. from NASA Earth Observatory
Map of Oeno Island Archived 26 September 2007 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုအီးနိုးကျွန်း&oldid=727557" မှ ရယူရန်
ပစ်ကိန်ကျွန်းစုရှိ အလယ်၌ ရေငန်အိုင်ရှိသော သန္တာကျောက်ကျွန်းများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။